B&O BeoPlay E8, mahedhifoni aunoda kukwanisa | IPhone nhau
B & O BeoPlay E8, mahedhifoni aunoda kuti ukwanise kutenga
"True wireless" mahedhifoni, iwo asina waya zvachose uye asina kana tambo inobatanidza imwe headset kune imwe, ari kuramba aripo muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Iine AirPods sereferenzi, vagadziri vakaedza kukwikwidza neApple inowanzo nani-mutengo wemusoro, asi kwete zvirinani zviripo. Asi kana mucherechedzo seB & O watangisa chimwe chinhu kumusika, zano racho rakatosiyana.
Mushure memavhiki maviri uchishandisa BeoPlay E8, ekutanga asina waya mahedhifoni kubva kuDanish brand Vakawana izvo kwete chete kuti ini handirangarire maAirPod angu, asi nekuziva vasiye pamba uye vasarudze diki E8. Ruzha rwemhando yepamusoro uye zvemberi zvekutonga zvinosiya maAirPod mu "zvakajairwa" mahedhifoni anongounza. Kwese kuongorora kuri pasi apa.
1 Zvimiro uye dhizaini
2 Inonyaradza, asi kwete yemitambo
3 Inzwi repamusoro rinosiya makwikwi munzvimbo yakaipa
4 Yepamberi bhatani kutonga
Zvimiro uye dhizaini
Iyo BeoPlay E8s ine isina kushamisika yakajairika dhizaini, iyo isingafanire kuve iko kukanganisa. Yakagadzirwa yepamusoro-soro isingaremi polymer uye iine mamwe maaluminium ruzivo, senge mhete iyo inotenderedza iyo inobata pamusoro peye nzeve imwe neimwe, ivo vakareruka chaizvo uye vakasununguka kupfeka. Iwo anozogadziriswa munzeve yako nekutenda kune iyo iyo silicone pad inokwana zvakakwana mumutsara nzeve, zvakare inoshanda kukutsaura iwe kubva kuruzha rwekunze iyo inonyatso kuvandudza kurira kwemahedhifoni. Akawanda maseti emakusheni enzeve akasanganisirwa mubhokisi, saka iwe unozogona kuwana iwo anoshandira nzeve dzako.
Mamwe mahedhifoni erudzi urwu haana kana pasina bhokisi rekutakura iro rinovashandisazve, uyezve aya BeoPlay E8 anoisanganisira, uye nekuwedzera kune dehwe. Ine dhizaini chaiyo yeB & O, imba yacho yapera mune yepamusoro mhando dehwe uye ine rabha iyo inozoshanda kuichengeta yakavharwa mune manyorero eMaleskine notibhuku. Kana mahedhifoni achipa angangoita maawa mana ekuzvimiririra, ayo anoverengeka kana mashoma kusangana nekushandisa kwandakavapa, iro bhokisi rinovapa anosvika kumamwe maawa masere nekutenda kune maviri akazara mhosva yaanopa. Iwe unongo fanirwa kudziisa munzvimbo dzadzo dzakasiyana mukati mebhokisi uye kuchaja kuchazotanga pakarepo.
Chikanganiso icho mamwe mahedhifoni erudzi urwu anowanzove nawo ndechekuti hazvisi nyore kuzviisa zvakanaka mubhokisi ravo kuti uchaje. Vamwe vanotofamba uye hushoma hwausina kungwarira unoona kuti mahedhifoni haabhadhariswe paunoenda kuushandisa. B & O hainetswe nedambudziko iro, uye sekune maAirPod haugone kuenda panzvimbo isiri iyo, uye musoro wemusoro unowira munzvimbo "wega". Bhokisi racho rine microUSB connector iyo inokutendera kuti uiite recharge zvakare, uye ledhi inoratidza kuti mahedhifoni aripiswa, asi hapana nzira yekuziva mhosva yasara inosara, mhosva chete yatinogona kuisa. Iwo mahedhifoni haaratidze yavo yasara yekuchaja pane iyo iPhone, asi isu tichazosvika kune izvozvo gare gare.
Inonyaradza, asi kwete yemitambo
Aya maBooPlay E8s akasununguka, akareruka uye haawire pasi. Asi izvo hazvina kugadzirirwa zvemitambo, pakati pezvimwe zvinhu nekuti hazvipikisane nehunyoro kana ziyasaka unogona kuvashatisa kana iwe ukaapfeka iwo kujimu kana kumhanya. Izvo hazvina kugadzirirwa izvo, asi zvevamwe vese venguva dzezuva iwe paunoda kunakirwa nemumhanzi.
Ivo vakangwara kwazvo, uye zvakafanana neapo iwe paunoona mumwe munhu ane maAirPod iwe unogona kuvaziva zvakakwana nekuda kwekugadzirwa kwavo kwakasarudzika, vanhu vazhinji havatozozviona kuti wakapfeka mahedhifoni kunze kwekunge vaona. Kuiswa kwavo kuri zvakareruka kwazvo, nekuti ivo vanongofanirwa kuiswa mukati mugero, kutendeuka kushoma uye ivo vanozokwana zvakakwana. Ndave ndichiapfeka kweanopfuura maawa matatu uye handina kana kunetseka zvachose, iyo inoshamisa kwazvo mu-nzeve mahedhifoni.
Inzwi repamusoro rinosiya makwikwi munzvimbo yakaipa
Musiyano mumahedhifoni unofanirwa kuuya kana zvasvika pahunhu hwavo, uye maE8s anongoyevedza. Unogona kuedza kuzvikurudzira kuti mamwe mahedhifoni ane mutengo wakaderera anopa ruzha rwakafanana, kana kuti ese maBlue Bluetooth mahedhifoni akafanana nemisiyano midiki isinganyatso kuoneka. Chero chikonzero chaunoyedza kutsvaga kuratidza kuti mahedhifoni aya haana kukoshesa mutengo wavo haubatsiri., nekuti ruzha rwayo ruchienzaniswa nezvimwe zvigadzirwa zviri muchikamu chayo zvandakaedza zviri nyore, zvakanyanya, uye ini handisi kutaura nezve hunyanzvi ruzivo, ndiri kutaura nezve maratidziro azvinoita kubva panguva yekutanga yaunovaisa. on uye tinya yekutamba bhatani pane mutambi.
Pasina kuve nyanzvi mune kurira, ini ndine mashoma akaedzwa mahedhifoni uye ndine akati wandei kumba, emhando dzakasiyana, uye ini ndakakwanisa kuenzanisa kurira kweumwe neumwe wavo kana achitamba iwoyo iwo matraki. Mabhodhoro ari kurova asi haashande kuviga zvimwe zvikanganiso sezvinoedza kuitwa nemamwe mamodheru. Kana uchiteerera rwiyo neizvi BeoPlay E8 unowana manzwi ausingatomboone iwo neAirPods. Iko hakuna kukanganiswa pane yakakwira mavhoriyamu pano, uye kungoita ruzha kukanzura kwavanako nekusimbisa zvachose yako headphone chiteshi kunopa kune yakanakisa yekuteerera chiitiko.
Izwi iri rinogonesawo kuburikidza nechishandiso chatinogona kuwana mu App Store. Inosanganisira kutonga kwekutamba iyo ingori anecdotal, asi inobatsira kwazvo iyo yakaenzana iyo yatinogona kugadzirisa yemhando yega yega odhiyo iyo yatinoda kuteerera, iine akati wandei preset presets uye mukana wekumisikidza yedu pachedu. Tinogona zvakare kusarudza kuti ndeipi nzira yekujekesa yatinoda kumisikidza isu tisingade kuzviparadzanisa zvachose kubva kunze.
Yepamberi bhatani kutonga
Asi pane imwe nzvimbo kwavanovandudza makwikwi: iwo anotonga. Imwe neimwe headset ine yekubata pamusoro iyo inoshandiswa kudzora kutamba, kugamuchira mafoni, vhoriyamu kumusoro uye pasi, nezvimwe.. Uye inozviita nenzira yakajeka. Imwe pombi kurudyi kuvabatidza, imwe kutanga kutamba. Iwe unoda kufambira mberi kune imwe track? maviri anobata kurudyi. Unoda kudzokera kumashure here? Kubata kumaviri kuruboshwe. Kugonesa iyo yakajeka nzira iyo iwe yaunogona kunzwa zvakakukomberedza iwe uchafanirwa chete kubata kuruboshwe kamwe chete, uye kumisikidza Siri, kurudyi imwe katatu. Zvekufona zviri nyore kwazvo: chero iwe chaunobata, mumwe kuti agamuchire, maviri kuti urembedze, dzvanya uye ubatisise kuramba runhare.
Neiri rakawanda runyorwa rwemabasa hapana kana chinosarudzika kana zvasvika pakubata kutamba neaya mahedhifoni, uye chaicho chimwe chete chauri kuda ndechekuti Apple yaishandisa zvakafanana mune yavo. Iwo maitirwo anoshandawo mushe mushe, nekuti iwe unongofanirwa kubata iyo yekubata pamusoro, iyo zvakare yakakura zvakakwana kuti usarasikirwe (iyo nzvimbo yakatenderera pane iyo B & O logo iri). Hapana chikonzero chekusvina, chingobata, chiri nyore uye chakasununguka. Ivo zvakare vane imwe nzira yekuda kuziva iyo inomira kutamba kana iwe uchibvisa mahedhifoni, uye inoita saizvozvo nedaro pakati pemaviri mahedhifoni, isina mamwe ma sensors. Kana ivo vakatamira kure kubva kune mumwe nemumwe, nekuti iwe wabvisa iyo kubva munzeve yako, inomira, uye kutamba kunotangazve kana iwe uchidzorera kumashure. Iyo inomirawo otomatiki kana iwe ukaaisa iwo mune yekuchaja kesi.
Hunhu hunouya nemutengo, uye aya maB & O BeoPlay E8s ndiwo muenzaniso wakanaka weizvozvo. Ini ndakachengetedza mutengo weaya mahedhifoni kusvika pekupedzisira, nekuti zvingave zvinonyadzisa kana mumwe munhu akamira kuverenga ongororo iyi nekuti ivo vanoona mutengo wavo uchirambidzwa. Kwe € 299, MSRP yeBooPlay E8 mahedhifoni ku Amazon zvirokwazvo vazhinji vanoti vanowana mahedhifoni akafanana akadhura zvakanyanya, kana mamwe mamodheru akawandisa ane mhando iri nani yeruzha. Ichokwadi ndechekuti aya BeoPlay E8 anopa ruzha rwakanyanya achitarisa mhando yemusoro, aine huwandu hwemaawa mana (anosvika gumi nemaviri nenyaya) uye Vanosiya zvimwe zvigadzirwa senge AirPods kumashure kumashure kana maBragi mahedhifoni. Sezvandambotaura pakutanga kwekudzokorora, ndiwo ekutanga mahedhifoni akandiita kuti ndisiye maAirPod angu kumba, uye ndizvo zvakawanda.
Yakanaka kurira mhando
Kuzvitonga kwakanaka kwazvo
Yepamberi yekubata kutonga
Bhatiri rinotakura kesi
Kushanda kunobvumira kuenzana kurira
Transparency mode yekunzwa ambient ruzha
Nyaya isina bhatiri chiratidzo
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » B & O BeoPlay E8, mahedhifoni aunoda kuti ukwanise kutenga
Chii chakaitika nemahedhifoni ... Vanhu ava vanobva kuB & O vanoziva nzira yekuwana ruzha rwakanakisa ... Dai vaive nerunyararo kudzimiswa runyararo ivo vanga vari mukaka!
Tiri kutaura pamusoro pechiratidzo chakagara chiri kumberi mune ruzha. Icho chiratidzo.
Ini handifunge chinhu zvachose kubva mukubatanidzwa neApple TV, handiti?
nekuti imwe yesimba reAirPods ndeyekuti, inogona kushandiswa nechero chipenga cheApple… ..
Kunyangwe zvakadaro ini ndinobvumirana newe kuti maAirPod anoshaya pamusoro pezvose zvirinani kugadzirisa kuti ugone kushandisa vhoriyamu kumusoro / pasi kutonga, ruka nziyo, dzorera nziyo nezvimwe…. kana uchishandisa Siri. Ndinoziva kuti neIO zvinhu gumi nezviviri zvinoita kunge zvakagadziriswa mune izvi asi zvine nzvimbo yakawanda yekuvandudza uye zvinotora nguva yakareba kuti zviite izvi zvitsva.
Uye zvakadiniko nemaoko-akasununguka? Nekuti ndiyo imwe yesimba reAirPods….
Apple inononoka kuchinja kukuru kweIOS kuti itarise pane glitches
Apple ndiyo kambani yakatenga mapurosesa mazhinji muna2017